Waxaan' shaqaaleysiinaynaa darawal/ baakadeeyaha! - Cuntooyinka giraangiraha
Waxaan shaqaaleyneynaa darawal / baakade!
Ma dooneysaa inaad door muhiim ah ka ciyaarto helitaanka cunnooyinka nafaqada leh ee waayeelka u baahan magaalooyinka Twin Cities? Tixgeli ka mid noqoshada kooxdeena ahaan darawal / baakidh jikada Fursadaha!
Darawalka / baakadaha ayaa mas'uul ka ah xirxirida iyo diyaarinta cuntada iyadoo la raacayo cuntada, taariikhda iyo goobta, u raridda cuntada xaafad kasta maalin walba iyo soo celinta iyo nadiifinta qalabka baakadaha. Waa inuu ahaadaa mid abaabulan, xirfadle ah, awoodna u leh inuu wax badan kala qabsado jawi mashquul aan faa'iido doon ahayn, la kulmo waqtiyada kama dambaysta ah, iyo inuu diyaar u yahay inuu shaqeeyo fiid naadir ah ama dhammaadka usbuuca.
Darawalka / baakaduhu waa inuu u hamuun qabaa hadafka Meals on Wheels, oo bixiya adeeg macmiil heer sare ah, noqo xirfad yaqaan xamaasad leh oo awood u leh inuu la dhiso xiriiro lala yeesho la-hawlgalayaasha gudaha iyo dibaddaba.
Gaadhi si aad u hesho sharraxaadda shaqada oo dhan iyo tilmaamo ku saabsan sida loo codsado.
Febraayo 6, 2018